Wasiiro katirsan xukuumadda Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha Puntland - Bandhiga Media
Oct09 October 9, 2019
Wasiiro katirsan xukuumadda Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha Puntland
Shalay ilaa xalay waxaa kulamo ay uga socdeen magaalada Boosaaso wasiiro katirsan xukuumadda Federalka Soomaliya iyo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland.
Kulanka ayaa looga hadlayay heshiis dhexmara Dowladda Federalka iyo Puntland iyo soo afjaridda khilaafka u dhaxeeya, sidoo kale waxaa kulanka intii uu socday waxaa dowladda Federalka ay ka dalbatay Madaxweynaha Puntland Saciid Dani inuu ka baaqdo caleemo saarka Axmad Madoobe.
Wasiirada kulanka la qaatay Saciid Dani ayaa dhamaantood ka soo jeeda Puntland waxaana hogaaminayay wasiirka qorsheynta Jamaal Xasan iyo wasiiraka arrimaha dibadda Axmad Cawad.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in kulanka uu ku soo dhamaaday Isfahan waa iyo fashil iyadoo Saciid Dani uu diiday inuu ka baaqdo Caleemo Saarka Axmad Madoobe.
Deni ayaa sidoo kale dowladda ka diiday inuu joojiyo taageerada uu siinayo Jubbaland, kadib Isfahan waaga Wasiiradii ka socday dowladda eek a soo jeeda Puntland ee shalay gaaray Magaalada Boosaaso Manata dib ugu soo laaban doonaan Magaalada Muqdisho.
Galmudug oo loo magacaabay Guddi dhisa iyo Xaaf oo ka hadlay
Rwanda sets pace in Clean Public Transport System